विचार Archives - Manaslu Post
काठमाडौं : आज विजय दशमी । विशेषगरी विजयादशमीमा रातो अक्षताको टीका लगाउने परम्परा छ। नेपालमा रातो अक्षताको टीका काठमाठौं उपत्यका र शहर आसपासबाट शुरु भएकोविश्वास छ । नेपालका दुरदराज गाउँहरूमा रंगको चलन तीनै शहर बजार आवतजावत गर्नेहरूले चलाए पछि गाउँघरमा पनि रातो टीका लगाउन थालिएको हो । केही जातजातीमा सेता अक्षताको टीका लगाउने चलन अझै पनि छ। अक्षता अर्थात् क्षत नभएको नटुक्रिएको चामल। अक्षता वा चामल...
महोत्तरी । महोत्तरीको मनराशिशवा नगरपालिकाको सहसराम बस्तीकी ५० वर्षीया इन्द्रकला कापरको चाडबाड लाग्यो कि मन कुँडिन्छ । कुष्ठरोगले गाँजेर धनुषाको लालगढ कुष्ठरोग अस्पतालमा उपचारपछि त्यहींँकै अनाथ आश्रममा आश्रय लिँदै आएकी कापरलाई घरपरिवारले खोजी नगरेपछि चाडबाडमा उनको मन रुन्छ । ‘देखु हजुर, दशहरा पावैन आयल, मुदा हमर घर सऽ कोनो खोजीपुछारी नई अई’ (हेर्नोस् हजुर, दशैंँ पर्व आयो तर मेरो घरबाट कहिल्यै सो...
अमेरिकाको कोलोराडोमा बस्ने क्रिस्टोफर वाट्सले पछिल्लो वर्ष अगस्ट महिनाको एकदिन अचानक थाहा पाए कि उनकी गर्भवती श्रीमती र दुई छोरी घरबाट गायब छन् । त्यस लगत्तै उनले विभिन्न मिडियामार्फत् आफ्नी बेपत्ता श्रीमती र छोरीहरुको मुक्तिका लागि अपहरणकारीसँग बिन्ती बिसाए । ३३ वर्षे वाट्सले टेलिभिजनमा यसरी निरीह अवस्थामा बिन्ती बिसाइरहँदा उनी सबैका निमित्त दयाका पात्र बने । सहानुभूतिको नजरले हेरिरहेका आँखाल...
समाजसेवी निमा लामा जनसेवा श्री मानपदवीद्वारा विभूषित
काठमाडौं । नेपाल सरकारले चुमनुव्री गाउँपालिका वडा नं ७ छेकम्पार निलेगाँउ चुम उपत्यका गोरखामा जन्मिएका राष्ट्र, समाजको समग्र बिकास, संस्कृति उत्थान एवं रुपानतरणको लागि निरन्तर लागि रहेका समाजसेवी तथा सामाजिक अभियन्ता निमा लामालाई प्रबल जनसेवाश्री मानपदवीद्वारा विभुषित गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा समाजसेवी तथा सामाजिक अभियन्ता निमा लामालाई ...
जसले बदल्नेछ तपाईंको जीवन, गर्नुहाेस् नयाँ बर्षमा १२ संकल्प
भोलि उदाउने घामसँगै हामी अर्को बर्षमा प्रवेश गर्नेछौ । अर्थात २०७५ साललाई बिदाई गर्नेछौ र २०७६ लाई स्वागत गर्नेछौ । तपाईंको यो बर्ष कस्तो रह्यो ? कति उपलब्धी हासिल भए ? कति खुसीपूर्वक दिनहरु विते ? कति राम्रा योजनाहरु बने ? के कस्ता काम थाल्नुभयो ? पारिवारिक जीवन कस्तो रह्यो ? तपाईंको स्वास्थ्यमा के कस्ता सुधार आए ? बर्ष २०७५ मा तपाईंले केही गुमाउनुभयो होला । केही झन्झट वा समस्याको सामना गर्नुपर...
अञ्जु पन्तले भनिन्, हुँदै नभएको विषयमा टिप्पणी गरेर मलाई मार्न खोजेको हो ?
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा गायिका अञ्जु पन्तको एउटा तस्विर बुधवार बिहान कसैले पोष्ट ग¥यो । तस्विर तराईको परिवेशमा खिचिएको थियो । एउटा गाडीको डिक्की खुल्ला थियो । गाडीको डिक्की भित्र केही झोला र किताबका बण्डल प्रष्ट देखिन्थ्यो । छेउमै उभिएकी थिइन् गायिका अञ्जु पन्त । त्यहि तस्बिरमा अधिकांशले क्याप्सन लेखे गायिका अञ्जु पन्त राहत संगै बाइबलको पुस्तक लिएर हुरी बतास पिडित भएको ठाउँमा पुगिन् । ...
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नवौँ स्मृति दिवस
काठमाडौँ, चैत ७ गते । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नायकका पनि नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आज नवौँ स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । कोइराला परिवार जहानियाँ राणाशासनको विरोध गरेबापत भारतको विहार राज्यको टेडी, सहर्षामा निर्वासत जीवन बिताइरहेको समयमा वि.सं. १९८१ मा कोइरालाको जन्म भएको थियो । कृष्णप्रसाद कोइरालाकी कान्छी पत्नी दिव्या कोइरालाका कान्छा छोरा गिरिजाप्रसादको पूरै जीवन राजनीत...
बलात्कृतहरुको प्रश्न – ‘खै न्याय ?’
कालिका खड्का - काठमाडौ, पुस १३ गते । ‘मेरो दुवै आँखामा पट्टी बाँँधिएको थियो । बन्दूकको नालले हान्दै लतार्दै लतार्दै जङ्गलतिर लगे । मलाई होश आउँदा शरीरमा कुनै कपडा थिएन । शरीरभरि दाँतले टोकेका घाउ थिए । योनीबाट रगत बगिरहेको थियो ।’ दश वर्ष लम्बिएको सशस्त्र द्वन्द्वमा १२ वर्षकै कलिलो उमेरमा बलात्कारमा परेकी एक महिलाले आफूले भोगेको पीडालाई यसरी सम्झिन् । “सुनसान जङ्गल, रगतले डुबेको निर्वस्त्र शरीर, छ...
महिलाले धोका दिनुअघि देखाउने ५ व्यवहार
काठमाडौं । हामी चाहान्छौ हरेक सम्बन्ध लामो समयसम्म बनिरहोस् तर, कहिलेकाहीँ सोचेको जस्तो नहुन सक्छ । पहिला राम्रो देखिएको सम्बन्धमा केही समयपछि टकराव पनि आउन सक्छ । कहिले आफ्नै गल्तिका कारण त कहिले सामान्य विवादले समेत सम्बन्ध टुट्न सक्छ । यहीँ कारण पुरुषले मात्रै होईन महिलाले समेत आफ्नो साथीलाई धोका दिन सक्छन् । तपाईलाई समेत यस कुराले समस्या भएको छ भने जान्नुहोस् तपाईकी महिला साथीले तपाईलाई धोका...
..संघीयता खारेज नगर्ने हो भने देश कंगाल हुन्छ : चित्रबहादुर केसी.
बिर्तामोड, २६ असोज । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जबरजस्ती नेपालमा लागु गरिएको संघीयता खारेज नगर्ने हो भने देशै कंगाल हुने बताएका छन् । अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (छैठौँ) को २१औं राष्ट्रिय सम्मेलन बिर्तामोडमा उद्घाटन गर्दै केसीले संघीयता खारेजीका लागि सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्ने बताए । ‘संघीयता यो देशको माग पनि होईन र देशले धान्न पनि सक्दैन, यो संरचना खारेज नगरी देश...